သုတရသ – Shwemyanmar
သာမဏေလို့ခေါ်တဲ့ကိုရင်လေးများလိုက်နာကျင်သုံးအပ်တဲ့ သီလဟာအကျဉ်းချုပ်အား ၁၁၉ ပါး
ဝေဖန်ရေးစာကို မရေးချင်ဘူးဗျာ… တကယ်ပါ။ သူတစ်ပါးကိုဝေဖန်ရေးအလုပ်ကို လုံးဝလုံးဝ မလုပ်ချင်တာ စာရေးသူရဲ့ ဝါသနာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် မြင်ရ ၊ တွေ့ရတာတွေက သာသနာအတွက်ရော့ ဒကာ ဒကာမတွေအတွက်ရော့ ဂရုက လဟုကအပြစ်တွေ ဖြစ်နေကြသောအခါ မရေးချင်သော်လည်းရေးပါရစေ။ ပုံကိုမြင်ကြမှာပါ။ ဒကာ ဒကာမ(ဆရာ၊ ဆရာမ)တွေက မြင့်သောနေရာ၊ မြတ်သောနေရာကနေပြီး ကိုရင်လေးတွေက လက်အုပ်တွေချီပြီးဆရာကန့်တော့နေတဲ့ပုံပါ။ ဒီပုံဟာ အောက်က ကိုရင်လေးတွေသာမဟုတ်ခဲ့ရင် အရမ်းပဲကြည်နူးဖွယ်ရာမြင်ကွင်းပါ။ မြန်မာ့ဓလေ့နဲ့လည်း အလွန်လိုက်ဖက်သော ဂါရဝေါစ နိဝါတောစ မင်္ဂလာဖြစ်မည်မှာ အသေအချာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ အစားမတော်တစ်လုပ် အသွားမတော်တလှမ်းဆိုသလို အနေမတော်တော့ အများအမြင်မှာရော့ ၊ လောကဝေါဟာရအမြင်မှာရော့ ၊ ဘာသာတရားအယူအဆမှာရော့ အများကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်သွား ခဲ့ရတယ်။ ပုံကိုကြည့်ရတာ ဘကကျောင်းတစ်ကျောင်းက ဆရာကန်တော့ ပွဲတစ်ခုလို့ယူဆမိပါတယ်။ သို့ဆိုလျှင်ဦးစီးခေါင်းဆောင် ထိုကျောင်းရဲ့ပဓာနနာယကဟာ ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်လိမ့်မည်ဟု […]
Posted inသုတရသLeaveaComment on သာမဏေလို့ခေါ်တဲ့ကိုရင်လေးများလိုက်နာကျင်သုံးအပ်တဲ့ သီလဟာအကျဉ်းချုပ်အား ၁၁၉ ပါး
မှတ်ပုံတင်၏ရှေ့နံပါတ်များသည် ဘယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ဘယ်ပြည်နယ်များကို ကိုယ်စားပြုသလဲ? (မသိသေးသူများအတွက်) မှတ်ပုံတင်၏ရှေ့နံပါတ်များသည် သင်သည် ဘယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ဘယ်ပြည်နယ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည် (သို့) ဘယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ဘယ်ပြည်နယ်တွင် မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ နံပါတ်နောက်မှ အက္ခရာသည် မြို့နယ်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ၁ ဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ် ၂ ဆိုရင် ကယားပြည်နယ် ၃ ဆိုရင် ကရင်ပြည်နယ် ၄ ဆိုရင် ချင်းပြည်နယ် ၅ ဆိုရင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၆ ဆိုရင် တနင်္သာရီတိုင်း ၇ ဆိုရင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၈ ဆိုရင် မကွေးတိုင်း ၉ ဆိုရင် မန္တလေးတိုင်း/နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး ၁၀ ဆိုရင် မွန်ပြည်နယ် ၁၁ ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၂ ဆိုရင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၁၃ ဆိုရင် ရှမ်းပြည်နယ် […]
Posted inသုတရသLeaveaComment on မှတ်ပုံတင်၏ရှေ့နံပါတ်များသည် ဘယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ဘယ်ပြည်နယ်များကို ကိုယ်စားပြုသလဲ? (မသိသေးသူများအတွက်)
ကလေးငယ်ရှိတဲ့ မိဘတွေ ဂရုစိုက်ပါ
ကလေးငယ်ရှိတဲ့ မိဘတွေ ဂရုစိုက်ပါနော် ဖြစ်ပုံမှာ ( ကလေးရဲ့ မိခင် ပြောပြချက်အရ ) ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ နေ့ခင်း ကလေးကို သိပ်ထားပါတယ်။ ကလေး အိပ်ရာမှ နိုးလာတော့ လည်ပင်းမှာ မည်းမည်းကြီး အကွက် တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကလေးရဲ့ ခေါင်းအုံးကို ကြည့်လိုက်တော့ သေနေတဲ့ မီးရထား ပိုးကောင်ကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကလေးက အိပ်ပျော်နေတာ မသိပဲ ခေါင်းအုံးပေါ် တက်လာတဲ့ မီးရထား ပိုးကောင်ကို ဖိအိပ်မိရာမှ အဆိပ်ရည် ထွက်လာပြီး ကလေးရဲ့ အရေပြားထဲ စိမ့်ဝင်သွားပြီး ပုံမှာ မြင်တဲ့အတိုင်း မည်းလာပါတယ်လို့ ကလေးရဲ့ မိခင် ပြောပြပါတယ်ရှင်။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေ မအိပ်ခင် အိပ်ရာကို ခါ ပြီးအိပ်ရာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို သေချာ ဂရုစိုက်စေ […]
Posted inသတင်း, သုတရသLeaveaComment on ကလေးငယ်ရှိတဲ့ မိဘတွေ ဂရုစိုက်ပါ
ထိုင်ခုံမှာထိုင်ပြီးဘင်္ဂလားနဲ့စစ်ဖြစ်မှာကြောက်နေတယ်ဟုတ်စ ____________________________________________ ကျုပ်တို့တပ်မတော်ကစစ်သမီးတွေလဲအားနာပါအုံးအမတ်မင်းတို့ မြန်မာဆိုတာမသေမချင်းမှတ်ထားသူများလက်အောက် ဘယ်တော့မှမနေဘူး***** ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်ပုံပြလုပ်စားနေတဲ့ခများတို့လိုဒေါင်းယောင်ဆောင်တဲ့ သူတွေထဲမှာတပ်မတော်မပါဘူး မိန်းမထမိန်တန်းအောက်မှာနေနေတဲ့ခများတို့လို ကျုပ်တိုတပ်မတော်မပါဘူး စစ်ဖြစ်မှာကြောက်နေရအောင်ကျုပ်တိုနိင်ငံက’ခြေမရှိလက်မရှိ’ တွေမွေးထားတာမဟုတ်ဘူးစိန်ခေါ်ရဲတယ်ကျည်ကုန်ရင်ဓါးနဲ့ခုတ်မယ် ဓါးမရှိရင်ဒုတ်နဲ့ရိုက်မယ်ကုန်ကုန်ပြောမယ်အပ်တစ်ချောင်းနိင်သ၍ ကျုပ်တို့သွေးမကြောင်တတ်ဘူး****** #mmt akm(ygn) Credit
သွေးလှူဒါန်းခြင်း (သို့) လူသားဆန်တဲ့မြင့်မြတ်မှု ***************************** သွေးဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ပါ။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်ပတ်နေတဲ့သွေးပမာဏဟာ သာမန်အရွယ်ရောက်ပြီးလူတစ်ယောက်မှာ ၅ လီတာခန့် ရှိပါတယ်။ လည်ပတ်နေတဲ့သွေးပမာဏကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သွေးပမာဏလျော့နည်းသွားပြီဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ သာမန်အနည်းငယ်သွေးထွက်တာ၊သွေးဆုံးရှုံးသွားတာကို ခန္ဓာကိုယ်ကခံနိုင်ပေမယ့်သွေးဆုံးရှုံးမှုများလာတာနဲ့အမျှအန္တရာယ်လည်းပိုကြီးလာပါတယ်။ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သွေးပမာဏကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ဖို့ကအချိန်နဲ့အမျှအရေးကြီးပါတယ်။ သွေးသွင်းဖို့လိုလာပြီဆိုရင်သွင်းမယ့်သွေးကလက်ခံမယ့်သွေးနဲ့အမျိုးအစားတူဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကသွင်းမယ့်သွေးမှာကူးစက်ရောဂါမရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ လူကိုယ် ခန္ဓာမှာလည်ပတ်နေတဲ့သွေးက သက်တမ်းရှိပါတယ်။ သွေးနီဥဟာ ကိုယ်အတွင်းမှာ ရက် ၁၀၀-၁၂၀ ပဲရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။အချိန်စေ့လို့ သက်တမ်းကုန်သွားရင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ တကယ်လို့များမိမိရဲ့သွေးကိုလှူလိုက်မယ်ဆိုရင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်တယ် ဆိုတာလေးကို သတိပြုမိစေချင်ပါတယ်။ ဘုရားအလောင်းတော်တို့ ဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ ဒါနဥပပါရမီမြောက် အင်္ဂပရိစ္စာဂအကျင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သွေးသည်အသက် .. လို့ဆိုခြင်းကြောင့် အသက်ကိုပေးလှူရာရောက်တဲ့ ဇီဝိတဒါနကုသိုလ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ သွေးတစ်ပုလင်းလောက်ဟာ ကိုယ့်အတွက်ကြီးကြီးမားမားနစ်နာဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်မသွားပေမယ့် ကြီးမားတဲ့နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုတော့ ကယ်တင်လိုက်နိုင်မှာပါ။ သင့်သွေးစက်တွေနဲ့ အသက်ဆက်ရမယ့် ဘဝပေါင်းများစွာက မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်တွေအတွက် ကျွန်တော်တို့အားလုံး လူသားဆန်စွာ မြင့်မြတ်လိုက်ကြပါစို့။ […]
“နေ့နှင့်လများ၏အဓိပ္ပာယ်” နေ့အမည်များ၏အဓိပ္ပာယ် စာသင်ချိန်တခုတွင် ကလေးတယောက်က မရဲတရဲဖြင့်မေးသည်။ ကပ်သီးကပ်တတ် မေးခြင်း မဟုတ်ဘူးဟုလည်း စကားပလ္လင်ခံသည်။ မိမိကမေးခွင့်ပြုလိုက်သည်။ (စကတည်းကလည်း မေးခွင်ပြုထား ပါသည်။ မိမိအတွက်လည်းအကျိုးရှိ သူတပါးလည်းအကျိုးရှိရမည်ဟု ပြောထားသည်။) သူမေးသည်က Sunday, Monday ဟူသောအမည်တွေ မည်သို့ဖြစ်လာသနည်းဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိလည်း မှတ်သားထားတာလေးတွေ ကြိုးစားဖြေလိုက်ရသည်။ လိုအပ်သည်များကိုလည်း ရှာဖွေပြီး တင်ပြလိုက် ပါသည်။ Sunday ဟူသော အဓိပ္ပာယ်မှာ နေနတ်သားကို အစွဲပြု၍ ခေါ်သောနေ့ ဖြစ်သည်။ Monday သည် လနတ်သမီးကို အစွဲပြု၍ ခေါ်သောနေ့ဖြစ်သည်။ Tuesday သည် စစ်ကိုအစိုးရသော Jupiter ဂျူပီတာ နတ်မင်းကို အစွဲပြု၍ခေါ်သောနေ့ဖြစ်သည်။ Wednesday သည် လေမုန်တိုင်းကို အစိုးရသော ဝိုဒင်(Woden) နတ်မင်းကို အစွဲပြု၍ […]
14.12.2017 မှ 20.12.2017 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း
14.12.2017 မှ 20.12.2017 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ဒီကာလဟာ ကံဇာတာမြင့်မားနေတဲ့ကာလပါ။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အလုပ်အကိုင်တို့ စိတ်တိုင်းကျဖြစ်မည်။ စန်းပွင့်နေခြင်းကြောင့်အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး စိတ်ရှုပ်ရမည်။ အဝေးနေ သားချင်း ဆွေမျိုးအတွက် ကူညီပေးရမည်။ ခြေ၊ လက်တို့ အနာရကိန်းရှိသည်။ သူတစ်ပါး အရှုပ်၊ ကိုယ့်အရှုပ်ဖြစ်မည်။ ဒါပေမဲ့ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ လူရင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမည်။ မမျှော်လင့်ဘဲ လက်ထပ်ဖို့ကြုံလာရတတ်တယ်။ ကျန်းမာရေးချူချာမည်။ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ အဖိုးတန်လက်ဝတ်ရတနာများ ဝင်လာတတ်သည်။ ပညာရေးကဏ္ဍအတွက်အထောက်အပံ့ကောင်း အကူအညီကောင်းတွေ အထူးရရှိပါလိမ့်မည်။ အကျိုးပေးဂဏန်း – ၅ ၊ ၆ ၊ ၈ အထူးဟော – ချစ်သူနှင့် အချိန်မလွန်ပါစေနှင့် ယတြာ – သပြေပန်း ဘုရားလှူပါ တနင်္လာ ငွေကုန်ကြေးကျများနေတတ်သည်။ထင်မြင်လွဲမှားမှုများ ကြုံမည်။ […]
Posted inဗေဒင်LeaveaComment on 14.12.2017 မှ 20.12.2017 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း
ကမ္ဘာကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲလေပြီ —————————— ဟိုတလောက fb လောကမှာ ကမ္ဘာကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲခဲ့ရင်ဆိုပြီး ပေါ်ပြုလာဖြစ်ခဲ့တာ အခု တကယ်ဖြစ်လာပြီ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရခိုင်အရေးနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး မွတ်စလင်တွေက သူတို့ အင်အားတွေနဲ့သတင်အတုတွေ ပုံအတုတွေနဲ့ သူတို့ အနှိမ်အခံရကြောင်းရေးသား ဖြန့် ဝေကြတယ် မြန်မာနဲ့တူရကီ ဆိုက်ဘာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်တယ် သတင်ဋ္ဌာနတွေနဲ့မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေမှာ မြန်မာတွေကို ဆန္ဒပြကြတယ် ဒါပေမဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးပွဲမှာ အင်အားကြးနိုင်ငံတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကို ယုံကြည်ကြောင်း ပြောဆိုတယ် ဂျာမဏနိုင်ငံမှာ ဆယ်မိနစ်တစ်ကြိမ် သတင်းဋ္ဌာနတွေက ဘင်္ဂါလတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်က နှိပ်စက်တဲ့ပုံတွေနဲ့သတင်းလွှင့်တယ် ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးက […]
Posted inသုတရသLeaveaComment on ကမ္ဘာကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲလေပြီ
တကယ်​ဆို သမိုင်းကိုအဆိပ်​ခတ်​ရင်းနဲ့ ဗိုလ်​ချုပ်​ကို ဒုတိအကြိမ်​သတ်​​နေကြတာ………
တကယ်​ဆို သမိုင်းကိုအဆိပ်​ခတ်​ရင်းနဲ့ ဗိုလ်​ချုပ်​ကို ဒုတိအကြိမ်​သတ်​​နေကြတာ……… ==================================== အစိုးရ​ထောက်​ခံသူ​တွေက သမိုင်းကို အတင်းလိမ်​ကြတယ်​ ​အင်း​ပေါ့ လိမ်​မှလဲ သူတို့အစိုးရက အလုပြ်​ဖစ်​မှာကိုး….😂 ​ဗိုလ်​ချုပ်​ကို ခုတုံးလုပ်​ပီး နာမည်​ ရယူချင်​တာနဲ့ ဗိုလ်​ချုပ်​ ကို အကြိမ်ကြိမ်​နင်း​ချေ​နေတယ်​ အမှန်​တကယ်​ ပြန်​​လေ့လာကြည့်​ ဗိုလ်​ချုပ်​ကိုသာ အသုံးချ ပုံနဲ့နာမည်​ကို ဗန်းပြပီး လုပ်​စား​နေတာ ဗိုလ်​ချုပ်​နဲ့တူတဲ့​နေရာ တစ်​ကွက်​မှ မ​တွေ့မိ​သေးဘူး… __________________________ ဗိုလ်​ချုပ်​က ကိုယ့်​တိုင်းရင်းသား​တွေအ​ပေါ်အရမ်း ချစ်​တာ ဒါဆို ဗိုလ်​ချုပ်​​သွေးပီသရင်​ တစ်​ကယ်​တန်းသာ ​ဗိုလ်​ချုပ်​နဲ့ တူခဲ့မယ်​ဆိုရင်​ အမျိုးသား​ရေးသမား​တွေ ​ထောင်​ကျစရာမလိုဘူး ကိုယ့်​တိုင်းရင်းသား ရခိုင်​​တွေအသတ်​ခံရတဲ့ ကိစ္စမျိုးဆိုရင်​ အပြင်းအထန်​ အကြမ်းဖက်​​တွေအ​ပေါ်ပြတ်​သားရမှာ​လေ…. အခုဟာက……ဘယ်​မလဲ….တပ်​မ​တော်​ကို​တောင်​ အကြမ်းဖက်​​တွေကို သတ်​လို့အပြစ်​ဖို့လိုက်​​သေး….. ____________________________ ဗိုလ်​ချုပ်​က ပြည်​ပနိူင်​ငံ​တွေမ​ကြောက်​ဘူးဗျ … ကိုယ့်​နိူင်​ငံအတွက်​ ရဲရင့်​ခဲ့တာ…..အခု ခင်​များတို့က […]
Posted inသုတရသLeaveaComment on တကယ်​ဆို သမိုင်းကိုအဆိပ်​ခတ်​ရင်းနဲ့ ဗိုလ်​ချုပ်​ကို ဒုတိအကြိမ်​သတ်​​နေကြတာ………
မူရင်း Post တင်​သူ CRD ပါခင်​ဗျား။ တစ်နေ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကလေဖြတ်သွားပါသတဲ့။ အသက်အန္တာရယ် မစိုးရိမ်ရပေမဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်း တစ်ခြမ်းလုံး လှုပ်လို့မရတော့အတွက် အရမ်းစိတ်ဓါတ်ကျပြီး သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေက လူမမာသတင်းမေးရင်း အားပေးစကားပြောကြားပေးကြတာပေါ့။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေက သူစိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီး အားပေးစကားတွေပြောကြားတော့ ၊ သူက သူအကြောက်ဆုံးက ခုချိန်မှာ သူ့မိန်းမက သူ့လိုလူနာကိုပစ်သွားမှာကိုကြောက်လွန်းလို့ ပိုပြီးစိတ်ဓါတ်ကျရပါတယ်တဲ့။ အဲဒီလိုပြောပြီးသိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး။ တကယ်ပဲ မိန်းမဖြစ်သူက သူ့ကိုပစ်သွားပါတယ်။ အပေါင်းသင်းတွေက သူအရမ်းဝမ်းနည်းလို့ သွားပြီးအားပေးစကားတွေနဲ့ နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့အခါ သူက သူ့အမှားတွေကြောင့် သူမဒီလိုထွက်ခွာသွားရတာကို အပြစ်မတင်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ၀မ်းနည်းနောင်တရမိပါတယ်လို့ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး အိမ်ထောင်ရေး သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ … သူမ အိမ်မှု ကိစ္စတွေနဲ့ ရှုပ်နေတိုင်း သူဟာ အခန့်သားနဲ့ ဘောလုံးပွဲကြည့်လိုက်၊ အခွေကြည့်လိုက်၊ ဂျာနယ်ဖတ်လိုက်၊ ရုံးအလုပ်လေးတွေလုပ်လိုက်နဲ့ […]
Posted inသုတရသLeaveaComment on ထာဝရအဖေါ်မွန် ဆိုတာ